Mariro 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Vanhu vanonyengeterera kudzoswa
“Yeukai zvakatiwira” (1)
‘Tine nhamo; takatadza’ (16)
“Haiwa Jehovha, tidzosei kwamuri” (21)
“Itai kuti mazuva edu ave matsva” (21)
5 Haiwa Jehovha, yeukai zvakatiwira. Tarisai muone kuzvidzwa kwedu.+ 2 Nhaka yedu yapiwa vanhu vatisingazivi, dzimba dzedu dzapiwa vekune dzimwe nyika.+ 3 Tava nherera dzisina baba; vanaamai vedu vaita sechirikadzi.+ 4 Tinotofanira kubhadhara kuti tinwe mvura yedu,+ uye huni dzedu pachedu tava kutoita zvekudzitenga. 5 Vaya vari kutidzingirira vava mugotsi medu;Taneta, asi hatisi kuzorodzwa.+ 6 Tinotambanudzira ruoko rwedu kuIjipiti+ neAsiriya,+ kuti tiwane zvekudya zvakakwana. 7 Madzitateguru edu ayo akatadza haasisipo, asi ndisu tava kutakura kukanganisa kwavo. 8 Tava kutongwa nevaranda; hapana anogona kutibvuta paruoko rwavo. 9 Tinoisa upenyu hwedu* pangozi kuti tiwane zvekudya,+ nemhaka yebakatwa riri murenje. 10 Ganda redu rava kupisa sechoto, nemhaka yekurumwa nenzara.+ 11 Vakanyadzisa* madzimai ari muZiyoni, mhandara dziri mumaguta eJudha.+ 12 Machinda akaturikwa, akarembedzwa akasungwa ruoko rumwe chete,+ uye vakuru havana kuremekedzwa.+ 13 Majaya atakura guyo, uye vakomana vari kudzedzereka vakatakura masvinga ehuni. 14 Vakuru havasisipo pagedhi reguta;+ majaya haasi kuridza nziyo dzawo.+ 15 Mwoyo yedu haisisina mufaro; kutamba kwedu kwachinja kukava kuchema.+ 16 Korona yawa kubva mumusoro medu. Tine nhamo nekuti takatadza! 17 Izvi zviri kuita kuti mwoyo yedu irwadze,+Uye nemhaka yezvinhu izvi maziso edu haachanyatsooni,+ 18 Nemhaka yekuti Gomo reZiyoni rava dongo;+ makava ava kungofamba mariri. 19 Kana muri imi, haiwa Jehovha, munogara pachigaro chenyu cheumambo nekusingaperi. Chigaro chenyu chinoramba chiripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 20 Nei muchitikanganwa nekusingaperi, muchitisiya kwenguva yakareba kudai?+ 21 Haiwa Jehovha, tidzosei kwamuri uye tichabva tangodzoka kwamuri.+ Itai kuti mazuva edu ave matsva seaya ekare.+ 22 Asi makatiramba zviri pachena. Muri kuramba makatitsamwira chaizvo.+
^ Kana kuti “Vakabata chibharo.”